MM Subbed Manga - For Manga Lovers who Love to read in MM
အိမ်နီးနားချင်း ညီအစ်မသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန် တို့နဲ့ သီယိုတို့ကြားမှာ ဘာတွေရှိမလဲ? သူတို့တွေ အရမ်းနီးကပ်လာချိန်မှာ ဘာတွေဆက်မဖြစ်ကြမလဲ?
Streamer ဖြစ်ချင်တဲ့ ဂျိုနသန်လီ (Jonathan Lee) တစ်ယောက် Stream လုပ်ဖို့ အခန်းရှာရင်း ဆိုဖီရာ (Sophie) ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ? အချိန်ပိုင်းလုပ်တဲ့ဆိုင်မှာ ဆေးလိပ်ဝယ်နေကျ ယုန (Yuna) ကရော ဘယ်လိုအကြောင်းတွေရှိမလဲ? သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့ထုတ် Wonder Woman: Dead Earth ရဲ့ပထမဆုံး စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ကမ္ဘာပေါ်ကို ဘာမှန်းမသိတဲ့အကောင်တွေရောက်နေပြီး ဒိုင်ယာနာ (Wonder Woman) ကလည်း ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိနေပါဘူး။ ဒီဘာမှန်းမသိတဲ့ဇာတ်လမ်းကို ဘာမှန်းသိသွားအောင် စောင့်ပြီး ဖတ်ရှုပေးပါ။ 🙂
(ဆမ်ကင်မ်) Sean KIM ဟာ အိမ်ကနေထွက်လာပြီး တက္ကသိုလ်နားမှာ အခန်းငှားနေတဲ့တစ်ယောက်။ (ဂျူဒီဟမ်) Judy HAHM က ဆမ့်အိမ်မှာလာနေတဲ့ ဆမ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ညီမ။ ဆမ်က ဂျူဒီရဲ့အစ်ကိုလုခ့်ကို ကြောက်ရတော့ ဂျူဒီကို ဘာမှမပြောရဲဘူး။ ဂျူဒီကအိမ်လခလည်းမပေး၊ အိမ်မှာထင်ရာလုပ်ပြီး ဆမ့်ကို ဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိတယ်လို့တောင် မထင်ဘူး။ တစ်နေ့ အိမ်ကို ဂျူဒီရဲ့သူငယ်ချင်းစုံတွဲ ရောက်လာချိန်မှာတော့ မထင်မှတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲလေးတွေကို ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈+ဖြစ်တဲ့အတွက် အပိုင်းအချို့ပဲ အလကားဖတ်လို့ရပါမယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် Messenger ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
(တန်ဂျီရို ကာမာ့ဒို့) Tanjiro Kamado ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ ရိုးသားပြီး ကြင်နာသနားစိတ်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖခင်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမယ့် သူဟာ သူ့ရဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ တောင်ပေါ်ကအိမ်လေးမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့ တောင်အောက်က ရွာတွေကို မီးသွေးဆင်းရောင်းပြီး မိသားစုဝမ်းစာအတွက် ကြိုးစားရှာဖွေနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့သူ့မိသားစုရဲ့နွေးထွေးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝက တစ်နေ့သောအခါမှာ အရာရာပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။ တနေ့ တောင်အောက်က ရွာကို မီးသွေးသွားရောင်းပြီး ပြန်အလာအိမ်အရောက်မှာတော့ သူ့မိသားစုတွေဟာ မိစ္ဆာရဲ့တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးနေတာကို မြင်တွေ့ရပါတော့တယ်။ တစ်မိသားစုလုံး အသတ်ခံခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေး (နဲဇုကို) Nezuko တယောက်သာ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကံဆိုးစွာနဲ့ ညီမဖြစ်သူဟာ မိစ္ဆာတကောင် အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့လို့မရတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မိစ္ဆာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပေမဲ့ ညီမဖြစ်သူမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အတွေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက် လူအဖြစ်ပြန်ပြောင်းနိုင်ဖို့နဲ့ မိသားစုအတွက် လက်စားချေနိုင်ဖို့ (တန်ဂျီရို)…